चितवन - कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गर्दा संक्रमित, तिनका आफन्त र सर्वसाधारणमा मनोवैज्ञानिक असर पर्न सक्छ। समयमै सचेत हुनसके यसको असर रोक्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन्। कोरोना संक्रमणका कारण मन आत्तिने, डिप्रेसनजस्ता समस्या देखिने गरेको चिकित्सकले जनाएका छन्। चितवन मेडिकल कलेजका मनोरोग विशेषज्ञ प्रा डा सिपी सेढाइँका अनुसार कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि मुटु ढुकढुक गर्ने, डर लाग्ने, निसास्सिएको महसुस हुने, बढी पिसाब फेर्न मन लाग्ने, मनमा अनावश्यक चिन्ता लाग्ने, एक्लै बस्न मन लाग्ने, भित्री मन खुसी नरहने, निन्द्रा नपर्ने, हरेक कुरालाई नकारात्मक दृष्टिबाट हेर्ने जस्ता समस्या आएका छन्। यस्तै ...
एजेन्सी - बेलायतमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप मानिसमा परीक्षण सुरु भएको छ। बेलायतस्थित विश्वप्रसिद्ध अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बिहीबारदेखि कोभिड-१९ विरुद्धको नयाँ खोप परीक्षण सुरु गरेको हो। युरोपकै पहिलो परीक्षणअन्तर्गत पहिलो दिन दुई स्वास्थ्य स्वयंसेवकले खोप लिएका छन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको जेनर इन्स्टिच्‍युट टिमकी प्राध्यापक सारा गिल्बर्टले आउँदो मे मध्यसम्ममा ५ सयसम्म स्वयंसेवीहरुमा उक्त खोप परीक्षण गर्ने योजना रहेको बताइन्। उक्त खोपको परीक्षण सफल हुनेमा आफू पूर्ण आशावादी रहेको उनले बताएकी छिन्। मानव परीक्षणको प्रारम्भिक नतिजा सेप्टेम्बर महिनासम्ममा प्राप्त हुने अनुसन्धानकर्ताहरुले आशा गरेका छन्। बीबीसीका अनुसार, खोप लिनेमध्ये एकजना स्वयंसेवक एलिसा ...
एजेन्सी - चीनमा देखा परेकाे काेराेना भाइसका कारण मृत्यु हुनेकाे संख्या १ हजार १ सय १३ पुगेकाे छ। याे भाइरसबाट चीनमा मंगलबारसम्म ४४ हजार ६ सय ५३ जना संक्रमित भएका छन्। यस्तै हङकङमा ४९, ताइवानमा १८ र मकाउमा १० संक्रमणका घटना फेला परेका छन्। ४ हजार ७ सय ४० जना उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। गत वर्षको अन्त्यतिरबाट चीनमा देखिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि प्रयास भइरहेकाे छ। भाइरसको सुरुवात हुबेई प्रान्तबाट भएकाे थियाे। ...
एजेन्सी - २०१९ को अन्त्यतिरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार नाघेको छ। मंगलबारसम्ममा १ हजार १६ जनाको उक्त भाइरसबाट संक्रमित भई मृत्यु भएको जनाइएको छ। यसैगरी कोरोनाबाट अहिलेसम्ममा ४२ हजार ६ सय ३८ जना संक्रमित भएका छन्। सोमबार मात्र चीनको हुवेइ प्रान्तमा उक्त भाइरसबाट संक्रमित भई १०३ जनाको मृत्यु भएको जनाइएको छ। ...
चीनमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५६२ पुग्यो, २८ हजार संक्रमित
एजेन्सी - चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५६४ पुगेको छ । चिनिया राष्ट्रिय स्वास्थ्य आयोगको तथ्यांकअनुसार बुधबारसम्ममा यसबाट संक्रमित हुनेको संख्या २८ हजार नाघेको छ। एकैदिन ३ हजार ६ सय ९४ जनामा संक्रमण देखिएको छ। हुबेई प्रान्तका स्वास्थ्य अधिकारीहरुले बुधबारमात्र ७० जनाको मृत्यु भएको जनाएका छन्। कोरोनाको इपिसेन्टर यो प्रान्तमा हालसम्म ५४९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यहाँ बुधबारमात्रै २९ सय जनामा संक्रमण भेटिएको थियो भने हालसम्म हुबेईमा १९ हजार ६ सय ६५ जना संक्रमित भएका छन् भने ७६५ जनाको अवस्था गम्भीर ...
चीनमा कोरोना भाइरसबाट मर्नेको संख्या १ सय ७० पुग्यो
चीन - कोरोनाभाइरसको महामारीबाट चीनमा मृत्यु हुनेको संख्या १ सय ७० पुगेको छ । चिनियाँ अधिकारीहरुले नयाँ कोरोनाभाइरसका कारण १ सय ७० जनाको मृत्यु भएको र ७,००० जनाभन्दा बढी संक्रमित भएको बताएका छन् । कोरोना भाइरसका कारण हुवेईमा सबैभन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ । संक्रमित प्रत्येक पाँच जनामध्ये एक जनामा न्युमोनियाजस्ता गम्भीर समस्या देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । चीनबाहिर १६ देशमा यसको संक्रमण पाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले चीनबाट फैलिएको नयाँ कोरोनाभाइरसबारे पूरै विश्व सावधान हुनुपर्ने बताएको छ । डब्लुएचओले यसको फैलावट रोक्न सम्पूर्ण ...
१. पाचन सुधार्छपाचनलाई सुधार्नका लागि बिहान तातो पानीमा मह र कागती मिसाएर खानुपर्छ। यसले पेट सफा राख्न मद्दत गर्नुका साथै कलेजोमा रसको उत्पादनलाई बढाउँछ, जसबाट पाचन प्रक्रियामा मद्दत मिल्छ। कागतीमा रहेको एसिडले पाचनप्रणालीलाई मजबूत पार्न मद्दत गर्छ र अवान्छित विषाक्त पदार्थलाई बाहिर निकाल्छ। यसका अलावा महले एक एन्टीब्याक्टेरियलको रुपमा काम गर्छ र शरीरमा रहेको कुनै पनि प्रकारको संक्रमण हटाउन मद्दत गर्छ। २. कब्जियत हटाउँछतातोपानीमा मह र कागती मिसाएर खानाले कब्जियतलाई समेत निको पार्छ। यसले आँतलाई प्रोत्साहित गरेर दिसा खलास गर्नमा सहयोग गर्छ। यसका अलावा ...
काठमाडौं - बेलायतमा हरेक घण्टा औसतमा दुई सय जनाले चुरोट त्याग्ने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ ।यूनिभर्सिटी कलेज लण्डनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चुरोट त्याग्नेहरुको सङ्ख्या औसतमा बेलायतमा सबैभन्दा धेरै छ । गत १० बर्षको अवधिमा छिट्टै चुरोट त्याग्नेहरूको संख्यामा बेलायत सबैभन्दा अगाडि देखिएको पब्लिक हेल्थ इङ्ल्याण्ड (पिएचइ)ले जनाएको छ । राष्ट्रिय धुम्रपान अध्ययनको पछिल्लो विवरण अनुसार यही सन् २०१९ को जनवरीदेखि जुलाई सम्ममा धुम्रपान गर्ने वयस्कहरूको सङ्ख्या २.२ प्रतिशतले घटेको छ । बेलायतमा धुम्रपानकर्ताहरूको सङ्ख्या पछिल्लो समय निकै कम हुँदै गएको छ । अहिले ...
के हो डेंगु ?यो लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको कीटजन्य सरुवा रोग हो । एडिस एजिप्टाई र एलबोपिक्टर्स जातको संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइबाट मात्रै यो रोग सर्छ ।जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिलाई पनि यो रोग लाग्न सक्छ ।यो लामखुट्टेले सामान्यतः उज्यालोमा टोक्छ । संक्रमित लामखुट्टेका सबै अन्डा संक्रमित नै हुन्छन्, यसको अन्डा पानीविना पनि महिनौँसम्म जीवित रहन सक्छ । हरेक अन्डाबाट नयाँ लामखुट्टेको जन्म हुँदा प्रत्येक नवजात लामखुट्टेले डेंगुको विषाणु बोकेको हुन्छ र त्यसले अर्को स्वस्थ मानिसलाई टोक्दा संक्रमण हुन्छ । पोथी जातको लामखुट्टेलाई फुल पार्न ...
स्वस्थ यौन जीवनले यौन जोडीमा मात्रै हैन व्यक्तिको जीवनमा समेत खुसी ल्याउन मद्दत गर्छ। तर स्वस्थ यौन जीवनका लागि पोषणयुक्त खानपानमा ध्यान दिनै पर्छ। युवा अवस्थामा मात्रै हैन बुढेसकालमा पनि स्वस्थ यौन आवश्यक हुने हर्मन रोग विशेषज्ञ विनय भट्टराईको तर्क छ। पुरुषमा टेस्टेस्टेरोन हर्मनको कमी हुँदा पुरुषमा यौन इच्छा नहुँदा जोडीलाई नै समस्या हुन्छ। टेस्टेस्टेरोन हर्मन कम भई पुरुष उत्तेजित नहुनुलाई चिकित्सकीय भाषामा अन्सेट हाईपोगोन्याडिजम भनिन्छ। डा.भट्टराईले भने, ‘यसरी हर्मन कम भएको अवस्थामा कृत्रिम टेस्टेस्टेरोन हर्मन दिइन्छ।’ पुरुषको शरीरमा यस्तो हर्मनको कमी हुँदा हड्डी खिइनेलगायतका समस्या हुने ...